Social Media Nyanzvi Haigone Kubata Chokwadi | Martech Zone
Social Media Nyanzvi Haigone Kubata Chokwadi
Svondo, July 19, 2015 NeChishanu, Gumiguru 9, 2015 Douglas Karr
Ndanga ndichiita kuyedza munguva pfupi yapfuura. Makore mashoma apfuura, ndakafunga kuve 100% pachena nezve zvematongerwo enyika, zvemweya, nezvimwewo zvandinotenda pamusoro yangu Facebook peji. Icho chaisava kuedza… izvo zvaingova ini ndiri ini. Pfungwa yangu yanga isiri yekugumbura vamwe; kwaingove kujekesa zvechokwadi. Mushure mezvose, ndizvo izvo vezvenhau vezvemagariro vanoramba vachitiudza, handiti? Ivo vanoramba vachitaura kuti vezvenhau vanopa uyu unoshamisa mukana wekubatana neumwe neumwe uye kuve pachena.
Kuedza kwangu kwakatanga mavhiki mashoma apfuura. Ndakarega kutumira chero zvinokakavara zvinyowani pane yangu Facebook peji uye ndokungomira pakukurukura iwo misoro kana vamwe vanhu vakauya nawo pamapeji avo. Ichi chiitiko, asi kuyedza kwakakonzera kuti ndiuye kumhedziso nhatu:
Ini ndinonyanya kufarirwa kana ini Nyarara uye ndichengetedze maonero angu kwandiri. Ndizvozvo, vanhu havadi kundiziva kana kuda kuti ndive pachena, ivo vanongoda munhu. Izvi zvinosanganisira shamwari dzangu, mhuri yangu, mamwe makambani, vamwe vatinoshanda navo… wese. Vanga vachitaurirana nezvangu zvinyowani zvakanyanya kupokana kwavari. Ndosaka nei mavhidhiyo ekati achitonga Internet.
Vazhinji venhau venhau varairidzi kushaya chero nzwisiso muhupenyu hwavo hwega, matambudziko, zvitendero, uye nharo dzinoitika online. Usanditenda? Enda kune yako yaunofarira vezvenhau guru re Facebook peji uye tsvaga chero chinhu chine nharo. Ini handireve kusvetukira paruzhinji bandwagons - izvo zvavanowanzoita - ndinoreva kutora danho kupokana nechimiro quo.
Vazhinji venhau venhau varairidzi kuzvidza ruremekedzo ruremekedzo. Inotevera nguva iyo yaunofarira vezvenhau nyanzvi uyo akataura kana kunyora bhuku kujekesa achisvetukira pane iyo bandwagon, uye iwe haubvumirane navo… taura zvakadaro pane yavo Facebook peji. Vanozvivenga. Hapana asingasvike katatu nguva ini ndakabvunzwa nemumwe wandaishanda naye kuti ibva papeji ravo uye tora maonero angu kumwe kunhu. Vamwe havana kunditevera uye havana kunditsamwira pavakaona kuti ndaive nedzidziso dzinopesana.
Usandibata zvisiri izvo, ndine shungu. Ini ndinoda gakava rakakura uye ini handidhori zvibhakera zvangu. Zvemagariro midhiya zvinotendamira munzira imwechete ini ndichigara ndichizendamira mune imwe nzira pane dzakawanda dzinokakavara misoro. Ini handipokane nevanhu kungopesana - Ndiri kungoedza kuva akatendeseka uye kujekesa pamusoro pezvandinotenda. Uye ndinoita zvese zvandinogona kuti ndirambe ndiri wechokwadi uye ndisina hunhu… kunyangwe ini ndisingaregedze kuseka.
Iwe unowanzo kunzwa online uye mune vezvenhau, tinoda hurukuro yakatendeseka. Bogus… vanhu vazhinji havadi kutendeseka, ivo vanongoda kuti iwe usvetukire pane yavo bandwagon. Vachakuda, vagovana zvaunovandudza, uye vatenge kubva kwauri pavanoona kuti unobvumirana navo. Chokwadi chezvemagariro enhau ndechekuti:
Iwe haugone kubata chokwadi.
Ndakatove nemumwe mutauri wekutaura akauya kwandiri pachiitiko chenyika, kundimbundira bere, uye kundiudza kuti anoda chimiro chandinotora pamisoro pamhepo… haangataure pachena. Haana kumbofarira kana kugovana chero pfungwa kana chinyorwa chandakagovana pane yangu Facebook peji kunyangwe iye achinditevera. Ini handidi kuisa mazwi mumuromo make, asi izvo zvinonyanya kundiudza kuti yake online persona ndeyekunyepedzera, yakanyatso kuvezwa kuti ive nechokwadi chekuzivikanwa kwayo isingaise mabhadharo ake panjodzi.
Saka handigoni kuzvibvunza. Ndezvipi zvimwe zvinotaurwa nevanhu ava pamhepo izvo zvinongo nyorwa kuti zvive zvakakurumbira, uye kwete kuti zvive chokwadi? Sezvo isu tichiendesa magariro enhau evatengi vedu, isu kazhinji tinowana kuti chii chiri mukurumbira haina kumbobvira yaita mhedzisiro sezvazviri zvakashata.
Heano kumwe kujekesa uye kuvimbika kwauri - vazhinji vezvenhau vezvenhau vashandi vanoreva nhema uye vanofanirwa kungozvibvuma. Vanofanira kukanda mazano avo eBS pamusoro pekujekesa uye voudza makambani kuti, kana vachida kuwedzera kusvika uye kugamuchirwa, vanofanirwa kudzivirira gakava, kusvetukira mukurumbira bandwagon, kugadzira chinonyengera ... uye tarisa iyo purofiti ichikura. Mune mamwe mazwi - tevera kwavo kutungamira uye kunyepa.
Mushure mezvose… ndiani ane hanya nekuvimbika uye kuvimbika kana paine mari yekuitwa.
Tags: hurukuro yakatendesekakutendesekavarevi venhemakureva nhemaevanhu vezvenhauvenhau vezvenhau varairidzisocial media nyanzvichokwadi
Silika: Chinja Dhata uye Spreadsheets muPapuriridzo Mifananidzo
Pinegrow: Inoshamisa Desktop Edhizaina neWordPress Kubatanidzwa
Jul 19, 2015 na1:31 PM
Nezvazvakanakira, ndinoda kubuda pachena kwako online. Zvinozorodza uye ndinoda kufunga kuti ndinokuziva zvakakwana kuti unzwisise chishuwo chako chegakava rine ruremekedzo. Ini ndinoda vanhu vakatendeseka online uye kure. Ndinokukurudzira kuti urambe uri wega.
Jul 19, 2015 na1:51 PM
Ini handisi nyanzvi pasocial media kunyangwe vamwe vanhu vanofarira kundiisa mubhokisi iro. Ini ndinongoda kuziva, unondiisa muboka semunhu asingagone kubata chokwadi, asinganakirwe nekukakavadzana uye nekuramba kubuda pachena?
Jul 19, 2015 na2:17 PM
Shel, zvakapesana. Wagara wakachengeta hukama hune ruremekedzo kuburikidza nekusiyana kwedu! Ndosaka ndichikuremekedzai zvakanyanya!
Jul 19, 2015 na4:31 PM
OK Doug, ndichati handibvumirani newe, zvichienderana nekuti chimiro chechimiro chaari kutora uye mamiriro ekubatana.
Kana iyo nharo kana kumira kweumwe kuri munharaunda yebhizinesi, yemaonero ekushambadzira, social media, nezvimwe, uye mumwe munhu asingapokane kana kubvumirana pachena kana paine gakava, saka ivo havasi kuva vechokwadi.
Kana gakava riri pachitendero, zvematongerwo enyika, hunhu hwevanhu kwete mumamiriro ebhizinesi, uye vakaramba vakanyarara, izvi hazvireve kuti vari kunyepedzera kana kuchengetedza munhu wenhema. Vanogona kunzwa sezvandinoita kuti pane nguva nenzvimbo yehurukuro dzakasiyana.
Mubvunzo wangu ndewekuti, uri kutsamwiswa neizvi here kana kungopenda nebhurashi rakakura kuti vaverengi vave vechokwadi? Ndinoedza kuva ane njere uye kudzivirira hyperbole mune zvandinotumira uye mhinduro, uye ivo havawane chiito chakawanda sekuzadzwa nemanzwiro, "hapana kusvetuka pane zvinonyomba" zvinyorwa. Chinhu chakanaka ini handisi wesocial media guru.
Jul 19, 2015 na4:40 PM
Zvakanaka kukanganisa kwechinyorwa, ndakachiendesa ndisati ndawana mukana wekuchigadzirisa…Sekutaura kwandaita, zvirokwazvo kwete guru resocial media (kunyanya kana zvasvika pakuziva magadzirisiro andinoita kubva pafoni yangu…)
Ndinovimba kuti pfungwa yangu yakanga yakajeka, kuti kutsvinya uye manzwiro anowana mhinduro asi hazvisi nguva dzose dzakafanira kana dzechokwadi.
Jul 19, 2015 na6:47 PM
Pfungwa yangu yakapusa… zvekuti nyanzvi zhinji dzinopa zano pasocial media havatomboteedzere zano ravo. Kubuditsa pachena uye kutaurirana hazvishande kunze kwekunge vakatendeseka uye vari pachokwadi. IMO, zvizhinji zvezvikonzero zvatine nyaya pamhepo kusakwanisa kwevanhu kutaura pfungwa dzavo uye kuita hurukuro yakatendeseka, kana kuti kusashivirira kwevari musocial network kuremekedza vane maonero akasiyana. Chero nzira, hazvisi kubatsira makambani kutaurirana zvinobudirira nevatengi vavo - kana zvakasiyana.
Jul 19, 2015 na7:59 PM
Dare iri harina kurongeka!
Ndinoti ukadzima vamwe vanhu unobatidza vamwe. Taura zvaunoda Doug (ndinoziva uchadaro). Chokwadi kune maoodles evanyengeri vanopopotera nezve huchokwadi vobva varatidza chokwadi chavo hachisi chinhu kunze kwepakati penzira, saka ndinofara kuti wazvizivisa.
Ndinofunga kuti chero kwaunenge uchienda, ukapinda mune zvematongerwo enyika unogumbura vanhu. Ndapota ita. Social media inofanirwa kubatsira kuita democratize nhaurirano, handiti?
Jul 19, 2015 na9:15 PM
Ndinofunga kudaro, Barry! Asi ndinoona kuti vakawanda vanozeza kutaura zvavanotenda. Zvakaipa kwazvo, mukuona kwangu.
Jul 20, 2015 pa 6: 52 AM
Zvinosuruvarisa, mari inoratidzika sechidzitiro chekushaya pachena. Yakanyorwa zvakanaka, yakataurwa zvakanaka uye yakararama zvakanaka.
Jul 20, 2015 na12:46 PM
Jul 20, 2015 pa 8: 56 AM
Ichi chidimbu chikuru, Doug. Kutaura pasocial media Emperor haana zvipfeko chiratidzo chisingawanzo kuratidza pachena.
Asi ini ndinofunga kusarudza "masocial media consultants" nekuda kwekushoropodza kwakatetepa. Kutya kuve wesocial media outcast inoganhura kugovana nevose kunze kwevanopandukira zvakanyanya pakati pedu.
Hapana kupokana kudiki kuti social media inosimudzira kuenderana uye kurongeka kwezvematongerwo enyika. Hunongovawo hunhu hwesvikiro.
Jul 20, 2015 na12:42 PM
Ichokwadi kuti dambudziko rakakura… asi vanhu vanoparidza uye vanobhadharwa ndivo vandiri kunongedzera chigunwe changu kwavari.
Jul 20, 2015 pa 8: 57 AM
Matauriro andaita izvi ndeekuti ini ndinowanzo kuenderera kune bhizinesi paLinkedIn uye pachangu paFacebook. Twitter inowana musanganiswa wakajeka wezvose zviri zviviri. Nekuda kweizvozvo, ini ndiri KUNYANYA kusarudza pane wandinoshamwaridzana naye kana kugamuchira zvikumbiro zveshamwari kubva paFacebook. Ndinoda kuti vandizive pachangu uye, nokudaro, havashamisike nemaonero angu uye/kana kuti vanoziva kuti ndinofarira nhaurirano ine ruremekedzo kana gakava.
Nenzira iyi, ndinoona kuti ndinogona kugovera maonero angu uye kupinda muhurukuro ndichiri kuchengeta hukama hwangu.
Jul 20, 2015 na12:47 PM
Saka iwe unofanirwa kuzviongorora nekuti vamwe vanhu vangapokana uye vanotokutonga pane zvaunotenda… zvisinei nekuti unoremekedzwa sei. Ndinoziva. 🙂
Jul 20, 2015 na4:49 PM
Ini handizive kuti ndaizofunga izvi secensorship zvakanyanya segmentation. :)'
Jul 20, 2015 pa 9: 59 AM
Chokwadi iyi yaive post inomutsa pfungwa. Ini ndinozvipira sei kuva chaiye kana bhizinesi richibatanidzwa? Nzvimbo yangu ichagumbura mumwe munhu ari kuita bhizinesi neni here kana kuti achaita bhizinesi neni? Ini handisi nyanzvi pazvinhu zvepamhepo zvekushamwaridzana saka ini ndinowanzo kusatumira. Amai vangu vaigarondiudza kuti ndisiyane nenyaya dzezvematongerwo enyika nedzechitendero. Kazhinji, vanhu vane ruzivo rwechokwadi, maonero uye makuhwa (FOG). Nharo dzinoita kunge dzakanamira mumatope ndidzo dzinotonga makuhwa nemafungiro. Ndine katsika kekuvanza manzwiro angu pane imwe nyaya seane musoro. Vanhu vazhinji vanoita zvimwe chetezvo. Ndipo chete pandinogona kutarisa manzwiro angu (uye vamwe vachiita zvimwe chetezvo) pamusoro penyaya yandinogona kubva pamafungiro nemakuhwa ndova nekurukurirano inobudirira. Thanks Doug nekuda kwechinyorwa chinomutsa pfungwa!
Jul 20, 2015 na12:48 PM
Ndatenda! Uye ndinobvuma… Ndinoshuva kuti dai takashinga zvakakwana kuti tiremekedze misiyano uye tirege kutiza nharo. Panoratidzika kunge paine pfungwa munyika ino yekuti uneni kana kuti unopokana neni… pane kungosiyana neni.
Jul 20, 2015 pa 10: 20 AM
Mifungo miviri kana ndikagona.
1. Vanhu ndevedzinza uye vanoda kurongeka uye kushanda zvakanaka. Havadi vaya vanogara vachikanganisa hurongwa uye vanowanzovadzingira kurenje. Izvi ndezvechokwadiwo mumagariro evanhu. Hapana svikiro richabvisa zviuru zvemakore zvemaitiro akadzika midzi mumakore mashoma. Sangano resocial media harina kushandura nzira iyo vanhu *chokwadi* vanodyidzana. Asi, yakawana nzira yekuti vanhu vagutse icho chinodikanwa chikuru chedzinza online. Ndosaka yakasimuka seroketi. Hazvisi zvitsva. Inogonesa chinhu chakanyanya, chekare.
Sezvandataura pamusoro, webhu uye midhiya yemagariro haisi madhiraivha ekuchinja, Ingori midhiya inogonesa uye inoratidza zvinofungwa nevanhu uye madzinza. Muzera rino rekutanga redhijitari, takawanzoshandisa social media senzira yekuti vese vakwanise kuwana tsumo yekuti '2 maminetsi emukurumbira' pane kutyaira zvakadzama uye nekusingaperi shanduko yemagariro. Sezvaiitwa neredhiyo neterevhizheni kare, social media yakakurumidza kudzika kuita svikiro kune vane mukurumbira parizvino kusimbisa mifananidzo yavo (semuenzaniso, Donald Trump) uye kune wese munhu ane muromo uye keyboard kuti ave 'mutungamiri wepfungwa', kana 'kuchinja. agent', kana kuti 'growth hacker'. Isu tiri kugara tichitamba mutambo wekugadzira mazwi matsva kuratidza kuti isu neimwe nzira tine mazano matsva (zvakare…kukura kubira), uye kuti tinofanira kurumbidzwa sevatungamiriri vanofunga. Takaderedza zvakare mazwi akadai se, 'genius', 'thought leader', 'guru' nemamwe. Zvinotaridza kuti mumwe munhu wese ari paLinkedIn ndemumwe kana anopfuura ezviri pamusoro, kunyangwe zvake mukurumbira waive weku'gadziridza' webhusaiti yebhizinesi remhuri yake uye kuvafambisa zvishoma kumusoro kweSEO manera. Kuzvininipisa uye tsika ndizvo zvinonyanya kufungidzirwa panguva ino, nepo mukurumbira nehunhu zviri mari yemazuva ano. Ini ndinofunga kuchave nenguva nyowani pane imwe nguva kana 'big bang' yadzika, asi kusvika ipapo, zvinongori zvese nezvangu uye mashandisiro andingaite iwe kuzadzisa zvandinoda.
Jul 20, 2015 na12:51 PM
Kufunga. Asi ini ndinowedzerawo kuti kazhinji ndeavo vanosiya vakanzwa uye vanonzi 'narcissists' vanosimudzira vanhu. Kana iwe uri chikamu cheboka, unogona kunge uri chikamu chedambudziko!
Jul 20, 2015 pa 11: 13 AM
Zvinoita sekunge watova ne SM Nyanzvi dziri kupokana newe pane ino positi. Irworwo haruratidzi pfungwa yacho here?
Jul 20, 2015 na12:49 PM
Ehe! Hungu, zvinodaro.
Ndiri naBarry Feldman. "... paunodzima vamwe vanhu, unobatidza vamwe vanhu." Ndagara ndichiti maonero angu ndeangu uye hapana mumwe munhu pasocial channels dzangu. Uye ini ndinonakidzwa nekushevedzwa hama dzangu dzisingagoverane maonero angu. Asi iniwo ndinobvumirana newe kuti kune vamwe vanhu vanotya kuita nharo votoitamba zvakachengeteka. Vanogona kutobvumirana neni asi havazobaya bhatani rekuti “like” nekutya kuwanikwa. Ini handisi mumwe wavo. Ini ndinoda vanhu vane edgy uye brands.
Jul 20, 2015 na6:32 PM
Ndinofunga kuti musiyano ndewekuti vamwe vanhu vanotaura zvavanotenda pasina kutonga vamwe kana vasingabvumirani. Ndakamira kutevera mumwe munhu rimwe zuva wandairemekedza chaizvo nekuti iye tweeted "mapenzi anotenda izvozvo ..." uye ndakave mumwe weavo "idiots." Ndinofunga kuti nyika yakanganwa kuti isu tinogona kusabvumirana tichiri kuremekedza kuti vamwe vanogona kunge vasvika pane imwe mhedziso yakasiyana kubva kune imwechete chokwadi.
Jul 20, 2015 na7:12 PM
Pfungwa huru yakadaro. Ndinoshuva kuti dai tadzosa kusawirirana kunoremekedza munyika muno.
Jul 29, 2015 na1:37 PM
Chinhu chimwe chandinonetsekana nacho ndechekuti zvinyorwa uye vezvematongerwo enyika vanobhadharwa kuti vatore chimiro, semunhu webhizinesi unoisa panjodzi yekuparadzanisa tarisiro nevatengi. Ini hangu handisati ndamboparidza pachena saka ndofunga ndiripachena 😉
Jul 30, 2015 na2:25 PM
Saka chokwadi. I'm sure my rants have lost me some clients and tarisiro. Nekudaro, ndoda kushanda nevanhu vanoremekedza kuti ndingava nemaonero akasiyana pane asina. Isarudzo yakaoma, chokwadi.